Ithegi: kwimithombo yeendaba ezinkulu | Martech Zone
Maka: kwimithombo yeendaba ezinkulu
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndisebenze ngokungakhathali ukwakha oku kulandelayo kwi-Intanethi, igunya, kwaye ekugqibeleni lishishini eliqhuba kakuhle. Ngoku, ndijamelene nabantu abanqwenela ukuqesha iinkonzo zam ukuze ndibancede benze okufanayo. Ngamanye amaxesha yinkampani enkulu enetalente entle kwaye ndiyakwazi ukuhambisa. Ngamanye amaxesha akunjalo kwaye ndinikezela ngenkonzo eyahlukileyo. Kule minyaka, ndibukele abanye begqitha kum kwi-Intanethi kwaye ndiye ndafunda a